လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] - Page 2
51 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 6:49 pm
52 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 7:07 pm
ကို mars ရေ....မြန်၂ လေးဆိုတာကို ဖြုတ်ပြီးပြော မဟုတ်ရင် သင်္ကြန်ပြီးလောက်မှရလောက်မယ်
53 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 7:18 pm
αℓт.332 wrote: ကို mars ရေ....မြန်၂ လေးဆိုတာကို ဖြုတ်ပြီးပြော မဟုတ်ရင် သင်္ကြန်ပြီးလောက်မှရလောက်မယ်
ဟုတ်ပါပြီ ငါ့ညီ L လေးရယ်.... ဒါနဲ့စကားမစပ် ငါ့ညီဘာသင်ခန်းစာပို့စ်လေးတွေရေးဦးမလဲမသိဘူးနော်... :exercise အကိုက အဲလို ကိုယ်တိုင်ရေးတွေဆို တအားစိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်ချင်တာ... (မြှားဦးလှည့်တယ်လို့ပြောရ၀ူးနော်) :kiss ငါ့ညီရေးတဲ့ ပို့စ်တွေလည်း ဖတ်ချင်သေးတယ်ကွာ... အကိုက သိပ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ force မလုပ်တတ်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် ငါ့ညီလည်း ဒီဖိုရမ် ဒီဖိုင်းကို လုပ်တဲ့သူဆိုတော့ကာ... :undecided :undecided ငါ့ညီကတော့ သင်္ကြန်အပြီးမလုပ်နဲ့တော့နော်... အခုနည်းနည်းတော့ အစပျိုးထားလိုက်တော့....
54 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 7:22 pm
ကျွန်တော်က ဟိုစပ်၂ ဒီစပ်၂ ပါဗျာ...ဘာမှမတတ်ပါဘူး ရေးဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါ
55 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 7:31 pm
αℓт.332 wrote: ကျွန်တော်က ဟိုစပ်၂ ဒီစပ်၂ ပါဗျာ...ဘာမှမတတ်ပါဘူး ရေးဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါ
အဲလိုစကားလေးနဲ့လောက်တော့ ရ၀ူးလေ..... ညီလေးတို့တောင် အဲလိုပြောရင် အကိုတို့က နေစရာမရှိတော့ဘူးနော်... အဲဒိ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ဆိုတာလေးတွေကိုပဲ ငါ့ညီက အခြေခံလောက်ဖြစ်ဖြစ် ရေးပြပေးရင် အကိုတို့လည်း ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်သိရတာပေ့ါ... တအားအမြင့်ကြီးတွေပြောရင် အကိုတို့က နားမလည်ဘူးလေ... ကူညီကောင်းပါတယ် ငါ့ညီရယ်... အကိုတို့က ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိမတတ်တော့ အခုလို သိတဲ့သူတွေကို လိုက်ရေးခိုင်းပြီး ဖတ်နေရတာ... စာအုပ်တွေကလည်း ရှိတာရှိတယ် အများကြီးဆိုတော့ သ်ိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူးကွ... အခု င့ါညီတို့ရေးသလို လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ နည်းနည်းချင်းစီသင်သွားတော့ သင်မှန်းတောင် မသိရပဲ တတ်သွားမှာ... :kiss လိမ္မာတယ်နော်.. နော်...နော်...
56 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 7:38 pm
ရေးတော့ရေးနေတာပဲဗျ.. ခက်တာက ခက်နေလို့ ဘာရေးလဲဆိုတာ နောက် ၂ ပါတ်လောက်ဆို တင်ပေးပါ့မယ်...
57 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 7:42 pm
αℓт.332 wrote: ရေးတော့ရေးနေတာပဲဗျ.. ခက်တာက ခက်နေလို့ ဘာရေးလဲဆိုတာ နောက် ၂ ပါတ်လောက်ဆို တင်ပေးပါ့မယ်...
ရှယ်ပဲကွာ... ဂွတ်တယ်.... ဒီပို့စ်တစ်ခုထဲမှာတင် ပို့စ်ရေးပေးဖို့ နှစ်ယောက်ရပြီ.... ကျန်တာတွေကတော့ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုရလဲဆိုတာ မသိသေးလို့ ပစ်မှတ်ထပ်ရှာလိုက်ဦးမယ်... :exercise ကဲနော်... မြိုင်ရာဇာ တွတ်ပီ လာပြီဟေ့ ဆိုပြီး ဒီဖိုရမ်ကိုမွှေပြီနော်....
58 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 30th January 2010, 8:59 pm
အနော် ..ဒီဆိုက်က အကို $ƴǩǾေ၇းထား bat အကြောင်းလေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံေ၇းထားတာတွေလို့ ဖတ်ကြည့်တော့စိတ်ဝင်စားတာနဲ့လေ့လာဖြစ်ခဲ့တာပါ...သေချာစိတ်ဝင်တစားလုပ်ကာမှပဲ ပြသာနာက ကြုံလာတယ်ဗျာ..
CHOICEေ၇ာက်တော့မှ အနော်စက်က choice ပါတဲ့ bat file ဆိုအဲနားမှာ ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်..
choice နဲ့ေ၇းထားတဲ့ bat file တွေဆို....
'choice ' is not recognized as in internal or external command,
operable program or bat file .
command မှာလည်း choice /? လို၇ိုက်၇င်...
တဲ့ အဲမှာေ၇ှဆက်မ၇တော့ဘူး ဗျာ...
59 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:02 am
ကို julykglay တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီထင်တယ်။
cmd >> choice /? ဆိုရင်တော့ ရရမှာပါ။
ဘာ Windows သုံးထားလို့လည်းဗျာ?
60 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:25 am
ဖို၇မ်ထဲေ၇းထား bat file တွေကို copy လုပ် Run လည်းမ၇ဘူးဗျ....
သေသေချာချာ လုပ်ကြည်ပြီးပါပြီ ..
window xp p2ပါ အကို......
61 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:32 am
ကျွန်တော် က Windows7၊ Vista နှစ်ခုလုံးမှာ စမ်းကြည့်တာ ရတယ်အစ်ကိုရဲ့
XP မှာတော့ အိမ်ရောက်ရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
62 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:36 am
ညီ လည်းထူးဆန်းနေလို့ .....ကိုယ်ပဲ အ တာထင်နေ့တာ..
63 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:38 am
Choice ကို ကျော်ပြီး တခြားဟာတွေဆက်ဖတ်ကြည့်လေ။
64 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:40 am
65 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:47 am
ထူးဆန်းတာဘဲ။ $ƴǩǾ လာမှ ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
66 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:50 am
xp sp3 မှာ စမ်းတာမရဘူး
ခုဏက ရတာက xp server2003 ကစမ်းတာ
67 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:53 am
ညီ က xp ဆိုတော့ ဆက်လေ့လာလို့မ၇တော့ဘူး..ပေါ့
68 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:56 am
အော် မေ့လို့ ။
choice မရရင် set နဲ့လည်း သုံးလို့ရတယ်နော်။
set /p userinp=chooseanumber(1-6):
(do more stuff here)
69 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 10:57 am
အဲဒီ choice အဆင့်ကို ခဏကျော်ထားလိုက်
70 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:02 am
set နဲ့သုံးလို့၇တယ်လား အကို..
ဒါဆို set နဲ့ပဲ Run လိုက်မယ်..ကျေးဇူး..
71 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:05 am
ခုလေးတင် $ƴǩǾ နဲ့တွေ့လို့ လှမ်းမေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။
သူပြောတာက "In XP, you need to use the "set" command instead of choice" တဲ့
ဒါပေမယ့် Choice အတိုင်းပုံစံတူ မရနိုင်ပါဘုးတဲ့။ ကန့်သတ်ချက် အချို့ ရှိနေပါတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဘာတွေဆိုတာတော့ သူလာမှမေးကြည့်တော့။
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုပြောသေးတယ် CHOICE ကို သုံးကိုသုံးရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ "you just need to include CHOICE.COM along with your batch file." တဲ့
ဒါဆို Choice.com ကို ဘယ်မှာရမလဲမေးတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ရပါတယ်တဲ့။
ကို ဆိုလာကော ၊ ကို july ကော အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
$ƴǩǾ က လောလောဆယ် မအားသေးလို့ပါတဲ့။ ညနေကျရင်လာခဲ့ပါမယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။
72 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:10 am
73 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:12 am
ကျွန်တော် ကူညီတာမဟုတ်ပါဘုး။ $ƴǩǾ ကူညီတာပါဗျာ။
74 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:15 am
ညီက ခုမှ post စေ၇းဖူးတာဆိုတော့ thanks မတွေ့လို့ ...ဟိဟိ..(ဘယ်နားမှာလဲ..ဟင် )
75 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:19 am
ညာဘက် ဘေးလေးမှာ စိမ်းစိမ်းလေးလေ။
76 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:21 am
အဲဒါကို အခါ(၁၀၀)လောက်နှိပ်ရတယ် သိလား
77 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 31st January 2010, 11:29 am
သေးသေးလေး အစိမ်းေ၇ာင် မျဉ်းကြောင်းလေးတော့တွေတယ်.....
(100)တော့ အနှိပ်ခိုင်းပါအကို၇ယ်...တစ်ခါနှိပ်ဖို့တောင် ၇ပ်သိ ၇ွာသိ ဖြစ်ကုန်ပြီး...
78 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd February 2010, 6:30 pm
Opera နဲ့တွေ့လိုက်တာ အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီထင်တယ်။
ကျွန်တော်လည်း အခု Online လာလည်း Forum ၀င်မရတဲ့အတူတူ ၊ ဒီ Bat အကြောင်းကို စာအုပ်သေချာပြန်လုပ်နေပါတယ်။
အစအဆုံးကို Ref တွေသေချာယူပြီးတော့ လုပ်နေပါတယ်။
အခုရေးထားတာထက် ပိုမို စနစ်ကျပြီး ထိရောက်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
March မှာ စာမေးပွဲရှိတယ်။
စာအုပ်ကို April လကုန်မှာ ထုတ်ပေးနိုင်အောင် ရေးပေးပါမယ်။
79 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd February 2010, 6:54 pm
အဲဒီလင့်မှာ ဘယ်ဟာကို ဒေါင်း၇မမှန်းမသိဘူး ...ညီထင်တာဒေါင်းလိုက်တော့ ၇တဲ့ဖိုင်ကို double click လိုက်တာ..
desktop ပေါ်မှာ ဖိုင်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်...choice ကိုေ၇ွးပြီ click တော့လည်း y/N ပြီးဘာမှလည်း
အ၇ာမထင်ဘူးဖြစ်နေတာလည်း စိတ်လည်းခတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ပဲ ခဏ တာ ၇ပ်စဲလိုက်၇တော့တယ် အကိုေ၇....
အကိုလည်း မအားဘူးလို့ ကို opera ပြောထားတာတွေလို့ အကို ကိုကူညီတောင်းဖို့စောင့်နေတာ...
တစ်လက်စ တည်းမေးပါ၇စေ...thanks လည်းပေးလို့ မ၇ဘူး...ဘာလို့လည်းသိဝူး......
Last edited by ٨††∂¢қєř on 3rd February 2010, 7:05 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : plz use code bro)
80 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd February 2010, 7:17 pm
အဲဒီ့ လင့်ခ်မှာ Down ဖို့က တစ်ခုထဲပါဂျ။
အဲဒီ့က Down ထားတာကို System 32 ထဲမှာထားရင်ထား ၊ မထားရင် Windows Folder ထဲမှာထားရင်ထားရမယ်။
ဒါမှမဟုတ် ၊ ကိုယ့် bat ကို သူများ စက်မှာ Run စေချင်ရင် အဲဒီ့ Bat Directory မှာ Down ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုပါ တစ်ခါတည်း bat နဲ့အတူထည့်ပေးရမှာပါ။
လောလောဆယ်တော့ Connection လည်းမကောင်းဘူးဗျာ။
BarCampers တွေအတွက် Downloading Service စီစဉ်တာလည်း မရတော့ ပြန်တော့မယ်။
စာကြွင်း ။ ။ ကိုဂျူလိုင် က ကို ဧပရယ် နဲ့ သူငယ်ချင်းမှလား။ ကျွန်တော်လည်း ကို ဧပရယ်ကောင်လေး နဲ့ သိတယ်။ ကျွန်တော်က အစ်ကို့ထက်လည်း ငယ်မယ်ထင်တယ်နော်။
81 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd February 2010, 7:27 pm
ခုနေ့ မအားသေး၇င် နောက်နေ့ကုညီပါနော်...(ကိုယ်ကအလုပ်မ၇ှိအကိုင်မ၇ှိ သူများကို နောက်ယှက်)
ပြန်စာ။ ။ ကို ဧပရယ် နဲ့ သူငယ်ချင်းတော့ဟုတ်ဝူးဂျ ...ညီကိုလည်းခင်ပါဂျာ.. အကိုကညီထက်ကြီးမှာပါ (အသက်)
82 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 3rd February 2010, 7:54 pm
မအားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ Connection မကောင်းတော့ ဟို file ကို ကိုယ်တိုင် Down ပြီး စမ်းပေးဖို့ မရသေးလို့။
83 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 4th February 2010, 8:23 pm
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ စမ်းသပ်ဖို့ save page as လုပ်ယူသွားပါတယ် (ဆိုင်မှာ ထိုင်မဖက်နိုင်လို့)
84 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 4th February 2010, 8:33 pm
အသက်က 17 ဆိုတော့ တော်တော်ငယ်သေးတာပဲ ကောင်းတယ်ကွာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရယ်နဲ့ ခုလို ထက်ထက်မြက်မြက် လုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတော့ တကယ်အားကျမိတယ် ( ငါနဲ့တော့ ကွာပါ့)
85 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 10th February 2010, 8:53 pm
internet acc ကို .bat file လေးနဲ ချိတ်ရတဲ နည်းလမ်းရှိရင်းေ၇းပေးပါနော် ရုံးမှာ ကျန်တော် အကောင့်က လိုကယ် အင်တာနက်ပဲရတယ် တခြား ၀က်ဆိုက်တွေ ကြည့်လို့မရလို့ပါဗျာ ကူညီပါဦးနော :cry
86 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th February 2010, 12:55 pm
ကို က ဘယ်နံပါတ်ကို နှိပ်ပါလို့ပြောထားပင်မဲ့ အဲ့ဒီနံပါတ်နှိပ်လဲရတယ် press any key လဲရနေတယ် အဲ့ဒါ ကိုယ် ပေးထားတဲ့ထဲက ဟာကိုပဲနှိပ်စေချင်ရင် ဘာလိုလုပ်ရလဲဆိုတာပြောပေးပါလား
87 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 11th February 2010, 6:42 pm
thuyazaw1985 wrote: internet acc ကို .bat file လေးနဲ ချိတ်ရတဲ နည်းလမ်းရှိရင်းေ၇းပေးပါနော် ရုံးမှာ ကျန်တော် အကောင့်က လိုကယ် အင်တာနက်ပဲရတယ် တခြား ၀က်ဆိုက်တွေ ကြည့်လို့မရလို့ပါဗျာ ကူညီပါဦးနော :cry
အဲ။ အစ်ကို့ ရုံး Server က ပိတ်ထားရင်တော့ ချိတ်လို့မရပါဘူး။
choice နဲ့ ပြန်ပတ်လိုက်ပေါ့။
တခြား key နှိပ်ရင် message တစ်ခုပြပြီးတော့ မူရင်း Condition ဆီ ပြန်ပို့ပေးလိုက်လေ။
88 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 12th February 2010, 3:36 pm
အကိုရေ ဖြေကြားပေးတဲအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် နည်းလမ်းရတဲ အချိန်အကြောင်းကြားပါနော်
89 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th February 2010, 9:18 am
အကိုရေ နောက်တစ်ရေးမယ်ဆိုရင် ဘားဂလိစာကိုမသုံးပါနဲ့နော်။
90 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th February 2010, 9:21 am
batch file လေးကို ဗမာလို E-book လေးစုစည်းပေးပါလား။ပီးရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုပို့ ပေးပါလား။စိတ်မရှိနဲ့ နော်။download မဆွဲတတ်လို့ ပါ။ပို့ ပေးပါဗျာ။please please please please
91 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 27th February 2010, 2:53 pm
zawmin wrote: batch file လေးကို ဗမာလို E-book လေးစုစည်းပေးပါလား။ပီးရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုပို့ ပေးပါလား။စိတ်မရှိနဲ့ နော်။download မဆွဲတတ်လို့ ပါ။ပို့ ပေးပါဗျာ။please please please please
ကျနော်တို့အနေနဲ့က ပို့ပေးတာဘာမှမခက်ပါဘူး... attach လုပ်ပြီး send လုပ်လိုက်တာနဲ့ ငါ့ညီမေးထဲကိုရောက်သွားမှာပါ... ဒါပေမယ့် နောက်ကို ငါ့ညီ ဒီဖိုရမ်မှာမှမဟုတ်ပါဘူး... ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် download လုပ်လို့ရအောင် စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်... အကြံပေးတာပါ... ဒေါင်းတာလည်းခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူး... ပေးထားတဲ့ လင့်ကို ကော်ပီလုပ်ပြီး address bar မှာ paste ပြန်လုပ်ပြီး download လုပ်ခိုင်းတဲ့ လင့်ရှိတဲ့နေရာတွေကနေ အဆင့်ဆင့်လုပ်သွားလိုက်ရင် (စာဖတ်ပြီးလုပ်သွားရင်) မခက်ခဲပါဘူး... ဒေါင်းလုပ် လင့်တွေကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဒေါင်းရပုံခြင်းကမတူပါဘူး... ဒါပေမယ့် အခြေခံကတော့တူတူပါပဲ... လုပ်ကြည့်လို့မှမရတဲ့နေရာတွေရှိနေရင် မေးပါ... ပြောပြပေးပါမယ်... ဒီဖိုရမ်ကလူတွေကအားလုံးကူညီချင်စိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်ဗျာ.....
92 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 2nd March 2010, 2:41 pm
I am really deeply sorry for everybody
93 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 2nd March 2010, 3:22 pm
ဒီ အစ်ကို $ƴǩǾ ရေးတဲ့ batch file post ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ။E-book ကိုဝယ်ဆိုလည်းဝယ်ပါ့ မယ်။ရေးပေးတဲ့အတွက် very thank you ပါ။ပြီးသွားရင်ပြောပါအုံးဗျာ။
94 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 2nd March 2010, 3:37 pm
ကျွန်တော်တို့ က အသက်သိပ်မကွာဘူးဆိုတော့ သူငယ်ချင်းလုပ်လို့ ရတာပေါ့ 
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေကcomputer သမားတွေမဟုတ်တော့သိပ်ပေါင်းလို့ မရဘူး
95 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 5th March 2010, 6:20 pm
zawmin wrote: ကျွန်တော်တို့ က အသက်သိပ်မကွာဘူးဆိုတော့ သူငယ်ချင်းလုပ်လို့ ရတာပေါ့ 
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော် လည်း ခင်တတ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း အပေါင်းအသင်းက သိပ်အများကြီးမရှိသေးပါဘူး။
ဒါနဲ့ Post တစ်ခုထဲနဲ့ ပြီးတဲ့ စာလုံးတွေကို ဘာလို့ ၃ ခု ခွဲပြီးတော့ Post တင်ထားတာလဲဟင်။ အချိန်မကုန်ဘူးလား??
ပြီးတော့ Thank You လုပ်ချင်ရင် ဘေးမှာ Button စိမ်းစိမ်းလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။
အခု အပေါ်က Thank You ပိုစ့်ကို ကျွန်တော် ဖျက်လိုက်ပါပြီနော်။
96 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th March 2010, 8:37 am
97 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 6th March 2010, 8:49 am
Notepad ကိုဖွင့် အောက်ကစာသားတွေကူးထဲ့ပြီးတော့ Filename.vbs နဲ့ Saveပေးလိုက်
msg=inputbox("Enter your text and Have Fun.....(ZAW MIN)","Talk it")
ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ English စာလုံးထဲ့ပြီးEnter နှိပ်။ကျေနပ်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
98 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 17th March 2010, 2:03 pm
က bat file တွေကို edit လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ် command က ဘယ် effect ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကို comment ပေးသလိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးလား ?
99 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 17th March 2010, 2:09 pm
အင်း။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့သဘောလည်းပါတယ်။
100 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial] on 17th March 2010, 2:13 pm
$ƴǩǾ wrote: အင်း။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့သဘောလည်းပါတယ်။
အဲသဘောလဲ ပါတယ်ဆိုတော့ နောက်ထပ် ဘယ်လိုသဘောတွေ ပါ ပါသေးလဲခင်ဗျာ. သိချင်လို့ ပါ. သိပ်မသုံးကြတော့ မသိဘူး
102 Re: လွယ်ကူလေ့လာ Batch File သင်ခန်းစာ [Tutorial]